Muwaadiniin badan oo u dhashay UAE oo ku jira boosas cusub oo muhiim ah oo ku yaal Emirates Airline
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Muwaadiniin badan oo u dhashay UAE oo ku jira boosas cusub oo muhiim ah oo ku yaal Emirates Airline
Guddiga Dalxiiska Afrika • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • Wararka Iiraan • Wararka Raaxada • Moroko News • Wararka Nepal • News • Pakistan War Deg Deg Ah • Dib-u-dhiska • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Suudaan • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Cadnaan Kazim, CCO Emirates
Sheekada Emirates waxay bilaabatay 1985 markii aan hawlgallo ku bilownay laba diyaaradood oo kaliya. Maanta, waxaan duulnaa duulimaadyada ugu waaweyn adduunka ee Airbus A380s iyo Boeing 777s, annaga oo siinayna macaamiisheenna raaxada diyaaraddii ugu dambaysay uguna tayada badnayd cirka.
Emirates maanta waxay ku dhawaaqday dhowr dhaqdhaqaaq hoggaamineed ganacsi oo ku baahsan Galbeedka Aasiya, Afrika, GCC, iyo Bartamaha Aasiya.
Lix xubnood oo khibrad leh oo ku jira kaalin hoggaamineed, dhammaan Muwaadiniinta UAE, ayaa gacan ka geysan doona in la wado dadaallada ganacsi ee shirkadda duulimaadyada suuqyada muhiimka ah iyada oo diiradda istiraatiijiyadeed la saarayo dib -u -dhiska booskeeda hoggaamineed iyo kobcinta saldhigeeda macmiil iyadoo waddammadu sii wadaan fududeynta xayiraadaha.
Dhammaan ballamaha cusub waxay dhaqan galayaan 1da Sebtember 2021.
Sababta ay Muwaadiniinta UAE ula wareegayaan jagooyinka muhiimka ah ee Emirates ?
Emirates waa diyaaradda UAE Airline ee fadhigeedu yahay UAE ee Dubai.
Dhaqdhaqaaqyada oo dhan waxaa ka mid ah kartida Emirati ee jagooyinka hoggaamineed ee muhiimka ah, ama laga dallacsiiyey ururka dhexdiisa ama wareejinta faylalka, taas oo saldhig u ah ballan -qaadka diyaaradda ee horumarinta xirfadda iyo horumarka Muwaadiniinta UAE.
Xoogga Dhismaha oo ka socda sumadda Emirates
Adnan Kazim, Madaxa Sarkaalka Ganacsiga, Emirates Airline ayaa tiri:
'' Waad ku mahadsan tahay xoogga Rabbiga Summada Emirates, leysarkayagu wuxuu diiradda saarayaa fulinta macaamilka istaraatiijiga ah iyo dadaallada ganacsi, iyo si caqli-gal ah dib-u-dhiska shabakadeena ku saleysan baahida la taaban karo, diyaaradda ayaa si fiican u taagan muddo dheer si ay u soo saarto natiijooyin hagaagsan markaan marayno soo kabashada. Dhaqdhaqaaqyada ka dhex jira kooxda ganacsiga ee la dejiyay ayaa si weyn u xoojinaya qaab -dhismeedkayaga maareynta suuqyada muhiimka ah oo dhan. Waxaan ku faraxsanahay shaqada adag iyo dadaalka ay Muwaadiniinta UAE u magacaabeen doorarkan ay muujiyeen si wax looga qabto caqabadaha 18 -kii bilood ee la soo dhaafay, ogeysiiska maanta wuxuu muujinayaa sida ay nooga go’an tahay inaan ka dhisno awoodda kursiga gudaha. ”
Ku -xigeenka cusub ee Emirates ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya
Jabr Al-Azeeby waxaa loo magacaabay Madaxweyne ku xigeenka Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Jabr wuxuu la joogay Emirates muddo 16 sano ah, isagoo hore u hayey jagooyinka Maareeyaha Wadanka Uganda, Qubrus, Thailand, Pakistan, ka hor inta uusan qaadan doorkiisii ​​ugu dambeeyay ee Madaxweyne ku -xigeenka, Hindiya, iyo Nepal.
Ku -xigeenka cusub ee Emirates ee Pakistan
Mohammed Alnahari Alhashmi ayaa loo magacaabay madaxweyne ku xigeenka Pakistan. Maxamed wuxuu dhowr door ku soo qaatay 18-kii sano ee uu la shaqeynayay Emirates, oo ay ku jiraan jagooyinka maamulka Kuwait, Indonesia, Syria, UAE, waxaana ugu dambeeyay uu qabtay doorka Madaxweyne ku-xigeenka Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Ku -xigeenka cusub ee Emirates ee Hindiya iyo Nepal
Mohammad Sarhan, oo hore u hayey doorkii Madaxweyne Ku -xigeenka Pakistan, ayaa noqon doona Madaxweyne Ku -xigeenka, Hindiya, iyo Nepal. Boostadii ugu horreysay ee uu Mohammad la yeesho Emirates wuxuu yimid 2009 -kii Cote d'Ivoire, tan iyo markaasna wuxuu dhowr door oo hoggaamineed oo ganacsi ka soo qabtay Vietnam, Greece, Thailand, Myanmar, iyo Cambodia.
Maareeyaha cusub ee Emirates ee Iiraan
Rashed Alfajeer, Maareeyaha Morocco, wuxuu noqon doonaa Maareeyaha Wadanka Iran. Xirfadda Rashed ee Emirates waxay bilaabatay 2013 iyada oo qayb ka ah barnaamijka tababarka maareeyaha ganacsiga. Rashed wuxuu qaatay dhowr door tan iyo markaas, oo ay ku jiraan Maareeyaha Ganacsiga Sri Lanka, Maareeyaha Degmada Dammam iyo gobolka bariga ee KSA, iyo sidoo kale Maamulaha Dalka Tansaaniya.
Maareeyaha cusub ee Emirates ee Morocco
Khalfan Al Salami, Maareeyaha Dalka Suudaan, wuxuu noqon doonaa Maareeye Morocco. Khalfan wuxuu ku biiray barnaamijka tababarka maamulka ganacsiga ee Emirates sanadkii 2015, wuxuuna sii watay tababar dheeraad ah Madrid ka hor inta uusan qaadan doorka Maareeyaha Ganacsiga ee Kuwait. Tan iyo markaas, wuxuu qabtay doorka Maareeyaha Dalka ee Suudaan.
Maareeyaha cusub ee Emirates ee Suudaan
Rashed Salah Al Ansari, wuxuu noqon doonaa Maareeyaha Dalka Suudaan. Rashed wuxuu la joogay Emirates tan iyo 2017, isagoo haya doorka Maareeyaha Taageerada Ganacsiga ee kala duwan ee Singapore iyo Jordan.
Alain St. Ange, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa ugu hambalyeeyay Rashed Salah Al Ansari iyo Khalfan Al Salami jagooyinkooda cusub ee Morocco iyo Sudan. St. Ange waxay tilmaantay doorka muhiimka ah ee Emirates ku leedahay Emirates oo isku xira Afrika iyo Dhaqaalaha, gaar ahaan dalxiiska adduunka.